ट्याग: इनबक्स प्लेसमेन्ट | Martech Zone
ट्याग: इनबक्स प्लेसमेन्ट
ईमेल प्रमाणीकरण के हो? यसले कसरी छुटकारा दिन्छ?
त्यहाँ मार्केटर्स र आईटी पेशेवरहरूबाट त्यहाँ धेरै अनभिज्ञताहरू छन् जब यो ईमेल डेलिरेबिलिटी र इनबक्स प्लेसमेन्टको कुरा आउँदछ। धेरै जसो कम्पनीहरूले विश्वास गर्दछ कि यो एउटा साधारण प्रक्रिया हो जहाँ तपाईं ईमेल पठाउनुहुन्छ ... र यो जहाँ हुनु आवश्यक हुन्छ त्यहाँ पुग्छ। यस तरिकाले काम गर्दैन - इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूको ईमेलको स्रोत प्रमाणित गर्न र यसलाई सम्मानित स्रोतको रूपमा मान्य गर्नको लागि पहिले तिनीहरूको संख्यामा धेरै उपकरणहरू छन्।